‘त्यो केटी मेरो छोराको लागि कुनै हालतमा सुहाउँदैन, मैले हुँदैन भनेपछि हुँदैन हुँदैन .....’ सहकर्मी साथीको दाइको बिहेको कुरा चल्दै थियो बुवा एकाएक जंगिन थाले। ‘बिहे गर्ने मैले हो ड्याड मलाई मनपरेपछि सक्किहाल्यो नि, तपाईको लागि बिहे गर्दिन लाग्या हो र?’ छोराको डाँको पनि ठूलै आयो। बाबुछोराको गल्फती चलिरहँदा आमाले सम्झाइन्, ‘छोराले मन पराएकी केटी ठिकै छ भने कुरा अगाडि बढाऔँ न किन तातो रिस गर्ने, वैशाखको पहिलो लगनमा बिहे गरौँला।’
बाउआमाले शहरमा पढ्न पठाएकी छोरी कहाँ के गर्दैछे, कसरी बसेकी छ, पैसा कसरी कमाउछे भन्ने कुराको अतोपतो हुँदैन। आफ्नी छोरी पैसावालसँग इज्जत बेचेर पैसा कमाएकी छ कि श्रम पसिना बगाएर कमाएकी छ गाउँमा रहेका सोझा बाआमालाई के थाहा? छोरीले पैसा पठाउँछे भन्नेहरू बिचरा सोझा बाआमा त्यसै दंग पर्छन्। अहिले त कलेजका विद्यार्थीसमेत होटल बुक गर्ने भन्दै हिँडेका समाचारहरु पढ्न पाइन्छ। पुरूष महासय तपाईका छोरीहरु संस्कारी बन्नुपर्ने, इज्जतमा बस्नुपर्ने , इज्जतको सीमा पार गर्न नहुने तपाईँलाई ज्वाइ पनि त्यस्तै संस्कार भएको चाहिने तर तपाईँहरूले एउटा कुरा कहिल्यै याद गर्नु भएन आफूलाई आफ्ना छोरी संस्कारी भएको हेर्न मन छ भने नातिनी, छोरी समानका अर्काका छोरीको इज्जत लुटेर के आनन्द लिनुहुन्छ? तपाईलाई संस्कारी इज्जतको ज्वाइ चाहिन्छ भने सम्झनुहोस् तपाई त्यो कोटामा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न? आफूसँग पैसा छ भनेपछि जे पनि गर्न हुने तपाईहरू सधैभरी दुधले नुहाएको बन्नुपर्ने तर तपाईले गरेको काम तपाईका छोराले दोहोर्‍यायो भने त्यसलाई बदनाम भएको ठान्ने? तपाईले अरूका छोरीलाई होटल बुक गरीगरी खनखनी पैसा तिरेर उसको शरीरमा हालीमुहाली गर्न हुने तपाईँकी छोरीको कसैसँग अफेयर चल्यो भने पनि उसलाई तथानाम गर्ने? इज्जत फाल्न आँटिस्, भोलि समाजले के भन्ला भन्दै यसलाई थर्काउन , दवाउन खोज्ने?
त्यही होटलको गार्डले उहाँहरु त पुरानो ग्राहक हो भनेपछि अरु बोल्ने बाटो बन्द भयो हाम्रो। हामी चारजना केटीहरु जाँदा आँखा तर्नेहरु पनि देखियो सायद उनीहरुले सोचेहोलान , केटीमात्रै आएका रहेछन् केटाहरू नलिइकन भनेर। हामी त बस नगरकोटको रमाइलो हेर्न गएका थियौँ तर नौटकीहरुको रमाइलो पनि देखियो। आफन्त भेटिहाले अफिसको कामले आएको अफिसको स्टाफ हो भन्ने अरुसँग के मतलव भयो र भन्नेखालकाहरू नै घरका जोडी छाडेर पैसा तिरेका जोडीहरु बनेर धेरै जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा गार्ड दाइले नै सुनाए। देख्दा बाउछोरी जस्तो लाग्छ तर के भन्नु र खोइ... भनेजस्तै। मलाई यस्ता युवती देखेर आक्रोस भन्दा पनि दया लाग्छ। अनि यस्ता महासयहरु देखेर ... के भन्ने कुनै शब्दै छैन। साँच्ची तपाईँले होटलमा रात कटाएकी केटीलाई कस्ले बिहे गर्छ? जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ? प्रकाशित मिति:
शनिबार, फाल्गुण ७, २०७३ १०:३०:५५